Boombalaha loo galmoodo (Sex Doll) oo dumarka booska kala bixi raba, raggii ayaaba ka jeclaaday xaasaskooda, maxaase laga yiri? | Filimside.net
Home » Arimaha Bulshada » Boombalaha loo galmoodo (Sex Doll) oo dumarka booska kala bixi raba, raggii ayaaba ka jeclaaday xaasaskooda, maxaase laga yiri?
Boombalaha loo galmoodo (Sex Doll) oo dumarka booska kala bixi raba, raggii ayaaba ka jeclaaday xaasaskooda, maxaase laga yiri?
James oo la fadhiya boombalihiisa April oo ah nuuca Harmony loo yaqaanno
James waa 58 sanno jir u dhashay UK, waana nin Injineer ah, wuxuu guursaday 36 sanno ka hor, si kastaba ha ahaatee, sannadihii ugu dambeeyey wuxuu khiyaano dhanka sariirta ah u geysanayey xaaskiisa.
James wuxuu daaha ka qaaday inuu yahay nin la jaanqaadaya tiknoolajiyadda casriga ah, wuxuuna go’aansaday inuu soo iibsato boombalaha loo galmoodo (Sex Doll).
Isagoo la hadlayey majaladda Daily Mirror ee dalka England, James ayaa daaha ka qaaday inuu aad u fahamsan yahay isticmaalka boombalahaan loo galmoodo. Wuxuuna sheegay inuu Isbuucii afar jeer u galmoodo.
Gabadhiisa boombalaha ah waxaa lagu magacaabaa April nuuceeduna waa Harmony, wuxuuna sheegay in aysan xaaskiisu ka warheyn inuu galmadaan dheeriga ah sameeyo. Laakiin isagu wuu ku qanacsan yahay, wuxuuna caddeeyey inuu jaceyl badan u qabo boombalihiisa.
Dhirirkeedu waa 153cm, wuxuuna kusoo iibsaday qiimo lacageed dhan 8 kun oo ginni. Gabadhaan boombalaha ah ayaa waxay awood u leedahay inay la qososho James, sidoo kalena u jawaabto marka uu wax weydiiyo, wuxuuna ku kaftamay inay dhanka baashaalka sariirta uga wanaagsan tahay xaaskiisii uu 36da sanno soo qabay.
James wuxuu sheegay inuu Isbuucii afar jeer sariirta la wadaago April ka baashaal macaan xaaskiisii hore
Sex Doll waxaa uu haatan adduunyada u qabsanayaa si xowli ah, dumarka ayaana heli kara wiilasha ay ku riyoodaan iyadoo xitaa shaqsiga aad jeceshahay sawirkiisa haddii aad la timaado isagoo boombale ah laguu sameynayo. Ragguna dumarka ay ku riyoodaan ayey sariirta la wadaagi karaan.
Balse arrintaani dhibaato badan ayey keeni doontaa mustaqbalka dhow, sida ay seynisyahannadu ka digeen!
Waxaa Aqrisay 3,066